Hordhaca mesh barbecue:
shaashad afar gees ah oo ka samaysan silig bir ah oo aan lahayn iyo silig bir ah oo la tomeeyey ama la alxanayo, ka dibna lagu farsameeyey mesh barbecue.
Walaxda mesh barbecue ee birta aan fiicnayn
silig bir ahama, silig kaarboon galvanized hooseeya. Dharka iyo sifooyinka: timaha iyo alxanka; Iska caabbinta heerkulka sare, ma laha qallafsanaan, ma laha miridhku, aan sun ahayn iyo dhadhan la'aan, fududahay in la isticmaalo;
Qaabka mesh barbecue ee birta aan fiicnayn
loo qaybiyay wareeg, labajibbaaran, qaanso, iwm.
Habka mesh barbecue ee birta aan fiicnayn
shabag fidsan, shabag duuban, alxanka argon, alxanka dhibicda, dhaldhalinta korantada
Noocyada mesh barbecue: labajibbaaran mash barbecue, mesh barbecue alxanka labajibbaaran, mesh barbecue galvanized laba jibbaaran, mesh barbecue galvanized laba jibbaaran, mesh bir laba jibaaran, mesh bir laba jibaaran, mesh bir laba jibaaran, mesh bir laba jibaaran .
Daaweynta dusha sare ee mesh barbecue
Mesh barbecue welded waxaa loola jeedaa shabagga barbecue ee la sameeyay iyadoo lagu alxanayo shabagga dunta leh ee tolka leh siliga birta, jarista siliga birta geeskeeda, ka dibna galvanizing. Guud ahaan, waxa kale oo loo yaqaan mesh barbecue galvanized, sidoo kale waxaa jira barbecue mesh leh chromium ama nikkel oo ku dhejisan dusha sare, kuwaas oo loo yaqaan mesh barbecue plated chrome ama nickel plated barbecue mesh. Qurux badan oo deeqsinimo leh, waarta, ma laha qallafsanaan inta lagu jiro barbecue; Dushu waa siman oo dhalaalaya. Waarta, aan miridhnayn, aan sun ahayn oo aan dhadhamin, fududahay in la isticmaalo.
Astaamaha mesh barbecue
tolmo ama alxan leh silig bir ah iyo silig bir ah. Qurux badan oo deeqsi ah, raagaya, barbecue ma qalloocin, dusha sare waa dhalaalaya oo nadiif ah, waara, aan daxalaysan, aan sun ahayn oo aan dhadhamin, waana fududahay in la isticmaalo.
Ujeeddada mesh-barbecue-ka birta ah
Maalmahan, dukaamada barbecue ee magaalada ayaa meel walba yaal. Barbecue waxaa lagu gartaa qaabab badan. Tusaale ahaan, hilibka waxaa ka mid noqon kara hilibka lo'da ee duban, hilibka lo'da ee duban, digaag duban, kalluunka kalluunka, kubbadda hilibka, hilibka xayawaanka, iwm. Digaagga oo keliya waxaa ku jiri kara kebabs digaag, baalal digaag duban, lugaha digaag duban, wadnaha digaag duban, xitaa maqaarka digaaga iyo galleyda. Intaa waxaa dheer, miraha sida basbaaska qudaarta, eggplant iyo xitaa muuska ayaa sidoo kale la duban karaa, sidaas darteed waxay caan ku yihiin dhalinyarada jecel inay iyagu sameeyaan.
Hore: Xirmada shaandhada shaandhada lakabka badan ee birta ka shaqaynaysa
Xiga: Dambiil silig bir ah oo aan caafimaad lahayn/dambiil jeermis dile